ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ စုပေါင်း ၀တ်ပြုပွဲ ကျင်းပနေချိန်မှာ မိုးကြိုးပစ်ချခဲ့လို့ ၁၆ ဦး သေဆုံး – WunYan
ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံ Seventh-Day Adventist ဘုရားကျောင်းမှာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ စုပေါင်း ၀တ်ပြုပွဲ ကျင်းပနေချိန်မှာ မိုးကြိုးပစ်ချ ခဲ့လို့ ၁၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒါဇင်နဲ့ချီ ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့ကြောင်း အေပီသတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် ၁၄၀ ကျော် စဆုတောင်းပွဲ လုပ်နေတဲ့ အချိန် မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ကလည်း မိုးကြိုးပစ်ခဲ့လို့ကျောင်းသား ၁၈ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
At least 16 people were killed and dozens more injured after lightning struckaSeventh-Day Adventist church in Rwanda,alocal official said Sunday. Fourteen victims were killed on the spot as lightning hit the church in the Nyaruguru district in the Southern Province on Saturday, local mayor Habitegeko Francois told AFP over the phone.
ခရဈယာနျ ဘာသာဝငျတှေ စုပေါငျး ဝတျပွုပှဲ ကငျြးပနခြေိနျမှာ မိုးကွိုးပဈခခြဲ့လို့ ၁၆ ဦး သဆေုံး
ရဝမျဒါနိုငျငံ Seventh-Day Adventist ဘုရားကြောငျးမှာ ခရဈယာနျ ဘာသာဝငျတှေ စုပေါငျး ဝတျပွုပှဲ ကငျြးပနခြေိနျမှာ မိုးကွိုးပဈခြ ခဲ့လို့ ၁၆ ဦး သဆေုံးခဲ့ပွီး ဒါဇငျနဲ့ခြီ ဒဏျရာ ရသှားခဲ့ကွောငျး အပေီသတငျးမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။ မတျလ ၁၁ ရကျနေ့ တနင်ျဂနှနေေ့ မှာ ခရဈယာနျ ဘာသာဝငျ ၁၄၀ ကြျော စဆုတောငျးပှဲ လုပျနတေဲ့ အခြိနျ မှာ ဖွဈပှားခဲ့တာပါ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ သောကွာနေ့ ကလညျး မိုးကွိုးပဈခဲ့လို့ကြောငျးသား ၁၈ ယောကျ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။